Ahoana No Hanamarihana Ny Bilaoginao Sy Hampitomboana Ny Isan’ny Mpamaky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2017 3:09 GMT
(Marihina fa tamin'ny 24 Martsa 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nieritreritra momba izany aho indray andro ary nahatsapa fa tsy mahafantatra ny fomba hanasongadinana ny bilaoginy mba ho voamarika ho anisan'ireo ireo bilaogy voalohany ao amin'ny milina fikarohana bilaogy: Technorati ny ankamaroan'ny olona. Fitaovana manan-danja izay afaka mampitombo ny mpamaky ny bilaoginao ny Technorati, ary raha misoratra anarana sy mamorona kaonty ao ianao dia hanampy anao hanangana ny “marikao” manokana ao amin'ny tranonkala izany.
Mariho ny bilaoginao raha te hahasarika mpamaky bebe kokoa ianao
Nitatitra ny Technorati fa misy bilaogy vaovao miisa 75.000 niforona isan'andro, inona no ataonao mba hanasongadinana ny anao? Inona no ataonao mba hahitana azy io?
Ny fanombohana ny fanamarihana ny lahatsoratrao miaraka amin'ny kaody ilaina ao amin'ny Technorati ny iray amin'ireo fitaovana mora indrindra mba hanondroana izany ao amin'ny bilaogy miisa 27,7 tapitrisa izay arahiny. Fomba iray hanampiana ny olona hahita ny lahatsoratrao ao anatin'ireo lahatsoratra maro be ny marika rehetra. Raha manoratra bilaogin-dahatsoratra izay manasongadina ny bilaogeran'ny teknolojia Afrikana ianao, dia azonao atao ny manamarika izany hoe “Afrika”, “Afrikana”, “bilaogy”, “teknolojia “, “tek”, sns … Tena tsotra ary misy dikany ny fanaovana izany tsikelikely.
Mety hiahiahy angamba ianao amin'ny voalohany, satria miatrika ity zavatra mampatahotra antsoina hoe “kaody” ity ianao ankehitriny. Kanefa tena mora tokoa izany. Raiso ny modely etsy ambany, izay nomarihiko ho an'ny “afrika”, ary soloy ​​amin'ny marika izay nosafidianao ny teny hoe “afrika”:
Tena mora tokoa izany. Esory sy avereno miaraka amin'ny marika samihafa. Mety ho toy izao izany raha manana marika miisa 4 ianao:
Ho an'ireo izay liana te ahafantatra ny fomba hametrahako ny kaody ao anaty bilaogy ho ohatra dia hanamora ny fampiasanao izany ny fitaovan'ny Tamba2 .
FANAMARIHANA: Notondroina ho toy ny marika ireo sokajin'ny mpisera WordPress, kanefa indraindray mbola te hampiasa ity koady ity ianao mba hampidirana ny marika andalana hafa izay ao amin'ny sokajy.